Umkhiqizi kanye neFektri engcono kakhulu yeTungsten Carbide Preform Toonney
Umlingiswa we-tungsten carbide ukuthi ubulukhuni buphakeme kakhulu, lokhu kuyinzuzo yalolu daba, futhi kwenza kube nzima kakhulu ukusetshenzwa kwe-carbide okuqinisiwe, kwezinye izinhlobo zamathuluzi wokusika akhethekile, ikakhulukazi lawo anezinyathelo ezinkulu kakhulu, isibonelo ithuluzi lokusika nge-dia enkulu kakhulu. wokusika ekupheleni, futhi shank encane kakhulu, machining kuthatha inkatho isikhathi futhi zabasebenzi. Ukuxazulula le nkinga, senza ama-preforms ama-net shape amathuluzi wokusika we-carbide ngokukhethekile, silolonga i-tungsten carbide ngemishini ye-CNC ngaphambi kokugcotshwa, bese sinter futhi sithola i-net shape eseduze ne-tungsten carbide engenalutho esiyibiza ngokuthi i-tungsten carbide preform.
Kungani i-tungsten carbide preform
Uhlamvu lwe-Toonney carbide preform
1. Isimo esiseduze senetha: singakwazi ukuklama cishe i-preform yesakhiwo se-net yesisekelo sakho samathuluzi wokusika okhethekile kulwazi lwethu.
2. Amabanga:Amamaki ahlukene wokusebenza okuhlukile, uToonney unikeza izinketho zebanga ngokubanzi empumelelweni yeminyaka ye-R & D. UToonney akanalo iqembu le-R & D elinethalente kuphela, kodwa futhi usungule ukubambisana kwamasu nesikhungo sokucwaninga ngezinto ezibonakalayo eyunivesithi edumile yaseChina iXiamen University, Central inyuvesi yaseningizimu kanye neyunivesithi yaseSichuan, okusenza sikwazi ukuba namandla amaningi ekunikezeni isisombululo sezinto ze-carbide esibanzi samakhasimende ethu ukuze asetshenziswe kabanzi we-tungsten carbide.
Ukulethwa okusheshayo: UToonney ungumnikazi wemishini eyanele ye-CNC yama-preforms, angaqeda ukuhleleka kwangaphambili ngaphambi kwesikhathi esifushane, futhi ahambise ngosuku lwesibili ngemuva kokuthola i-oda lezimo ezivamile, ezikhuluphele kakhulu.
Langaphambilini Amathiphu we-Carbide
Olandelayo: Carbide Ukuphela Mill